WARARKA SUUQA LIVE: Haddii Aad Ceshateen Ake Fadlan Naga Iibiya John Terry ,Bournemouth Oo Fariin Usoo Dirtay Chelsea – Kooxda.com
Home 2017 January Ingiriiska, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan WARARKA SUUQA LIVE: Haddii Aad Ceshateen Ake Fadlan Naga Iibiya John Terry ,Bournemouth Oo Fariin Usoo Dirtay Chelsea
WARARKA SUUQA LIVE: Haddii Aad Ceshateen Ake Fadlan Naga Iibiya John Terry ,Bournemouth Oo Fariin Usoo Dirtay Chelsea
January 11, 2017 · by	Jamuuni · 0
Kooxda Chelsea ayaa dhawaan waxaa ay amartay in loosoo celiyo ciyaaryahankeeda muhiimka ahaa ee Ake kaasi oo amaah ku joogay kooxda Bournemouth.
Da’yarka ayaa bandhig wanaagsan ka sameeyey kooxda Bournemouth waxaana uu sidoo kale ku lug yeehay natiijooyin mihiim ah oo ay kooxda gaaray.
Natheneil Ake ayaa hada dib ugu soo laabtay kooxda Chelsea balse sidaa kuma harin kooxda Bournemouth waxaa ay baadi goobayaan inay qaataan qabiirka daafaca kaga ciyaara kooxda Chelsea ee John Terry kaasi oo muddo kadib la saadaalinayo inuu ka tegidoono kooxdaan.
Hogaamiyaha da’da yar ee kooxda Bournemouth Eddie Howe ayaa sheegay inuu ku kalsoonyahay inuu lasoo wareegidoono daafaca dambe ee kooxda Cheslea ahna kabtanka kooxda John Terry kaasi oo hada da’da ay ka daba timid.
36-sano jirkan ayaa u baahan inuu helo boos joogta ah mana u muuqdo shaqsi ka bixikara xaalada Chelsea oo ah meel looga baahanyahay ciyaaryahano da’yar oo orod badan.
Maxaa yeelay ninka reer Taliyaani ee hogaamiya kooxda Chelsea ayaa bedelay qaab ciyaareedkiisa waxaana uu kooxda ku sameeyey isbedel inkastoo tan iyo markii ay shaxdaasi u guureen uu guuldareeystay kulankii ugu dambeeyey ee Tottenham.